Fitamiin C ma noqon karaa awood lagula dagaalmo Fayraska Corona? + Tijaabo lagu sameynaayo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Fitamiin C ma noqon karaa awood lagula dagaalmo Fayraska Corona? + Tijaabo...
Fitamiin C ma noqon karaa awood lagula dagaalmo Fayraska Corona? + Tijaabo lagu sameynaayo
Dhakhaatiirta Shiinaha waxay baranayaan awooda Vitamin C si ay ula dagaallamaan viruska soo ifbaxa ee Corona, kaasoo ku faafay daraasiin dalal ah kuna dhacay inka badan 80,000 oo qof kuna dilay ugu yaraan 3,000 oo qof.
Adduunku wuxuu ku bixiyaa wax kabadan $ 1.1 bilyan oo dheeri ah oo laga helo fiitamiin C, waxaana tiradaas la filayaa inay gaarto $ 1.4 bilyan marka la gaaro 2024.
Fiitamiinada noocan ah waxaa lagu yaqaanaa faa’iidooyin badan oo caafimaad, maadaama ay la dagaallanto hargab caadi ah, waxay xoojineysaa xusuusta, waxay baabi’isaa sunta, waxayna xoojisaa caafimaadka maskaxda, maadaama ay faa’iido u leedahay la-dagaallanka caabuqyada iyo fayraska sida hargabka, maaddaama ay sare u qaadeyso waxqabadka tallaalka waxayna gacan ka geysaneysaa soo saarista unugyada dhiigga cad, ee la dagaallama cudurrada.
Daraasad ayaa ka socota Shiinaha si loo ogaado haddii qiyaasta sare ee Vitamin C ka caawin karto la dagaallanka corona.
Baarayaasha wax ka barta Cisbitaalka Zhongnan ee Jaamacadda Wuhan, oo ah halka uu cudurku markii ugu horreeyay soo muuqday dhammaadkii sanadkii hore, ayaa tijaabinaya saameyntooda 120 bukaan oo qaba fayraska, halka natiijooyinka aan wali la soo saarin.
Mike Skinner, oo ku takhasusay cudurka virologist oo wax ka dhiga kuliyadda Imperial ee London, ayaa yidhi: “Hada garan mayno awooda fitamiin C-gu inuu la dagaallamo corona. Aan ogaanno natiijooyinka daraasadda uu sameeyay Shiinuhu. Waxay samaynayaan tijaabo xiiso badan.”
Dunida ayaa ku tartameysa waqti si ay u hesho daaweyn wax ku ool ah oo ka dhan ah cudurka dilaaga ah, halka shirkadda Pfizer, oo ah soo saare daawada ay Isniintii sheegtay in ay aqoonsatay qaar ka mid ah walxaha ka hortaga fayraska ee ay shirkaddu soo saartay oo niyad jabin kara Corona.
Shirkaddu waxay sheegtay inay rajeynayso inay natiijooyinka imtixaanka hesho dhammaadka Maarso, iyo inay ogaato haddii mid ka mid ah gaadiidleyda uu ku guuleystey, iyo “Pfizer” waxay rajeyneysaa inay baaritaanno ku sameeyaan gawaarida dhammaadka sannadka.
Michael Dolston, madaxa Sayniska ee Pfizer, wuxuu ahaa sarkaal shirkad daroogo ah oo Isniintii kula kulmay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Aqalka Cad.